Ntuziaka bara uru banyere otu esi eji HTCdev | Gam akporosis
Na ndị na-esonụ post na-akwado site na a video-nkuzi, M ga-egosi gị otu esi eji ndị HTCdev, ibe weebụ nke na-enye anyị n'ụzọ free, ngwaọrụ ndị ị chọrọ kpọghee ekwt bootloader nke a ọnụ ọgụgụ dị mma nke HTC ọnụ.
Na mgbakwunye, na ibe a anyị ga-ahụ ntuziaka zuru ezu iji nweta ọrụ nke akpọchi ndị bootloader nke ezigbo ọnụ ọgụgụ nke ọnụ.
1 Ihe ndị dị mkpa
2 Ndụmọdụ iji tụlee
2.1 Ngwaọrụ dị mkpa
Na mbụ debanye na weebụsaịtị HTCdev y pịa maka nkwenye na njikọ zigara na email gị.
Nwee onu HTC dakọtara na ndepụta nke ngwaọrụ ndị ị ga-ahụ na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke HTCdev, N'otu aka ahụ ị ga-enwerịrị USB debugging nyeere, nhọrọ a nwere ike ịchọta na menu ntọala ngwaọrụ na ngalaba ngwa / mmepe.
Batrị nke ngwaọrụ ị kpọghee bootloader agaghị enwe ike ọ dịghị n'okpuru 30%,, maka ihe nche ihe omume nke na-elekọta kpọghee bootloader ọ gaghị ahapụ gị ịmalite usoro ahụ.
Soro ndụmọdụ niile site na vidiyo na site na weebụsaịtị nke HTCdev, ịbụ na bekee, ọ bụrụ na ị ghọtaghị ihe, ị nwere ike iji ya Onye ntụgharị Google site na otu oyiri mado, tugharia ọdịnaya.
Ọ bụrụ na n'oge thekpọghe usoro ị na- kwụpụ mobile, HTCdev Akwadoro ka ịpụ kpamkpam usoro mmemme ahụ, kwụpụ eriri USB na kọmputa ma chere obere nkeji, wee mee mmemme ahụ ọzọ wee bido usoro ahụ ọzọ.
Ọ bụrụ na mgbalị nke abụọ a adaghị ọzọ, ọ kwesịrị tinye ọzọ ndị ọkwọ ụgbọala nke HTC site na itinye HTCsync.
Kedu otu nkwado ebe ị nwere nkuzi kọwara n'ụzọ zuru ezu na graphically akwado na nseta ihuenyo nke usoro a ga-ebu.
Wụnye ya Gam akporo SDK, java JRE y HTCsync, ọ bụ dị mkpa iji mezuo ihe atọ a tupu ịmalite bootloader lokpọghe usoro, n'ihi na ọ bụrụ na ị ga-enwe ugboro ugboro nsogbu na lokpọghe agaghị-agwụ agwụ.
Ozi ndị ọzọ - Etu ị ga-esi kpọghee bootloader nke ọnụ ọgụgụ dị mma nke HTC na HTCDev, Etu esi emeghe bootloader nke HTC terminals n'iji HTCdev
Budata - Gam akporo SDK, java JRE y HTCsync
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC » Ntuziaka Ntuziaka HTCdev
Daalụ maka onye ndu ahụ, mana otu ajụjụ, ọ na-emeghe bootloader na-eme ka ị ghara akwụkwọ ikike nke ekwentị ahụ?
Ee enyi dịka ọ dị
amigooooo Enwere m nzuzu, koodu mkpọghe ahụ bịakwutere m site na mail anaghị emeghe. Aga m enyere aka kpọghee ya .. M na a mac
Zaghachi na sergio mtz